Sazy an-tserasera lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
baolina kitra i baolina kitra any, ny baolina kitra foana! Ary ny taranaka rehetra ny olona mankafy ny fibanjinana ny zava-mitranga eo amin'ny dity. Fa tsy mba toy izany championships ireo matetika, ary toy izany koa ny toerana tena tsy maintsy hongotantsika ho an'ny ekipa, dia afaka, raha milalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Sazy. Nilalao baolina avy ny sazy lavitra ny vavahady teo am-piandrasana manao manetsiketsika ny vokatra. Mpijery manadino ny olo-miaina, clenched ny totohondry ary mivavaha ho tsara vintana ho an'ny mpilalao, ary rehefa mahay mametraka ny baolina ho amin'ny harato, olona mitsambikimbikina, namihina, mitsambikina ary niantsoantso amin'ny fientanam-po, toy ny ankizy.
Lalao Sazy tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra sazy lalao
Sazy ao amin'ny World Championship 2010
Sazy mpitifitra 2
World Cup amin'ny sazy
Sazy for Euro
Sazy Shootout 2010
Ny sazy shootout
Soccer baolina 2: New Levels
Forward 2: italiana Football
Sazy Shootout: Euro Cup 2016
Ben№10 - Sazy
Zombie baolina kitra: fanamelohana ho faty
Free Kick. WK - editie
Free daka - paikady
Cup sazy Fasana
Famonoana Football 2
Euro 2012: sazy
Fanaviana sazy Plus
World Cup: Sazy
Mandoa ny sazy amin'ny baolina kitra!
Ny Sazy Coco Shootout
Euro Football daka 16
Barca Tanjona 2
Tanjona! Tanjona! Tanjona!
Asio ny sazy
Sary: 2 sazy
Manokana amin'ny sazy 3
Misambotra 3D Sazy
Master 2 sazy
Photo Torque sazy
Johnny Bravo Football Championship
World Cup amin'ny Emirates
Baolina tanjona mpanohitra!
Direct malalaka daka
Free daka - sazy
Ben 10 Super Sazy
Farany sazy lalao
Sazy Roby Faggio
Herin'ny sazy CN
Pataloha @ sazy
Soccer Finger 2020
Ao ny sazy lalao maimaim-poana foana lalao an-tserasera mahaliana sy voly, satria lalao baolina kitra sazy - dia mahafinaritra ho an'ireo izay tia fanatanjahan-tena ity amin'ny endriny rehetra
Lalao Online Rehetra Sazy an-tserasera lalao
Fanamarihana: ny baolina!
Maro ny mpankafy baolina kitra tahaka ny mijery ny sazy. Izy io dia tena henjana fotoana izay ihany ny mpiandry harato avy ekipa sy mpilalao voaroaka ny mpanohitra ekipa. Ao amin'ny mpanafika mpilalao manana vintana tsara ny baolina ny tanjona: eo anelanelan'ny vavahady sy ny baolina dia tsy misy afa-tsy ny mpiandry harato vato misakana fahaizany mamikitra sy ny hafainganam-pandeha. Sazy tsy voatendry ho fandikana ny fitsipika ao amin'ny faritra ny sazy: andian-fitokonana afaka manapa-kevitra ny vokatry ny lalao, raha tsy afaka ny ekipa mba hamaritana ny mpandresy ny misy tany, na amin'ny fotoana fanampiny ny lalao.
Maro solosaina simulations ny fifaninanana baolina kitra mifototra fotsiny amin'ny tantanana sazy. Izany sazy lalao an-tserasera manome maimaim-poana ny fahafahana baolina ny tanjona ny ekipa isan-karazany, ny toerana tena nilalao baolina kitra Club na ny ekipam-pirenena. Ny fifaninanana Izao dia azo Hita ao ny endriky ny fifaninanana. Fidinao ny ekipa sy ny fandaharana kisendrasendra mamaritra ny mpanohitra ho anareo amin'ny 1/8 farany. Rehefa nandresy tamin'ny sazy shootout, ianao miditra ao amin'ny quarterfinals, moramora manao ny làlana mankany amin'ny farany.
Mahatsapa toy ny mpilalao baolina kitra lehibe, milalao lalao Sazy
Matetika manolotra tsimoka fametrahana sazy masontsivana roa: ny hery sy tari-dalana ny fiantraikany. Izany dia atao sequentially. Ohatra, dia midika voalohany izay lafiny amin'ny hazakazaka niakatra ho any amin'ny baolina baolina kitra, ary tsy miova mandeha ambaratonga dia miankina amin'ny fomba mahery izany dia hitsoka. Mba handresy ireo lalao, dia mila baolina iray isan'ny tanjona amin'ny vitsivitsy ny fanandramana – ohatra, ny tanjona telo amin'ny dimy milentika. Ny lalao baolina kitra Fitsipika sazy mamaritra mazava tsara. Fa ny sasany ho an'ny ankizilahy sazy lalao fampisehoana araka ny niova. Eto, ohatra, ny baolina tsy eo amin'ny toerana voasakantsakan'ny, ka nanakodia ny iray mpilalao baolina kitra. Ny mpilalao dia tsy maintsy hisafidy ny tsara fiolahana sy ny fotoana mety hitokona, handringana sy nanapaka fotsiny manodidina ny tongony raha mbola tena fetsy mpiandry harato.
Amin'ny-boly hafa virtoaly sazy ampiharina eo amin'ny fomba malalaka punching daka – ka ampio fihetsehana sy ny pitsiny no mahaliana; angamba ho mpilalao vitsivitsy ny mpanohitra ekipa, izay mandrakotra ny leha ny fitokonana. Indraindray izy ireo ao amin'ny rindrina, ary indraindray mihazakazaka foana Avy eo ankavia miankavanana. Mety hanova ny voalohany ihany koa ny toerana misy ny baolina. Misy lalao ho an'ny ankizilahy Soccer sazy tsy tolotra baolina, ary nokapohiny,-maso ny asa ny virtoaly sakana. Ao amin'ireo dikan-ny lalao azo atao na dia ny vazivazy: mba hahazo tokony tsy hisambotra ny baolina, fa tsy mahalala zavatra hafa manidina an-harato. Ny isan-karazany ny lalao dia azo maimaim-poana Sazy ao amin'ity fizarana ity ny toerana. Nankafy azy ireo, aza adino fa ny tena mahafinaritra be avy amin'ny baolina kitra dia afaka ho azo amin'ny alalan'ny scoring ny hany tanjona ao amin'ny tena tena tena vavahady ho any an-tsaha.